मधेसको माग पूरा गरे देशै रहँदैन - Ratopati
प्रमुख सचेतक, राप्रपा नेपाल
देशै नरहने माग कसरी पूरा गर्ने ?
संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनताको चाहना देशमा शान्ति छाओस्, सबै मिलेर बस्ने वातावरण बनोस् भन्ने थियो । तर, संंविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी दलले आन्दोलन गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । संविधानका विभिन्न बिषयमा असहमति हुँदाहुँदै पनि राप्रपा नेपालले त्यस्तो बाटो रोजेन । गैर–संवैधानिक प्रकृयाबाट देशै टुक्राउने लक्ष्य राखेर मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनप्रतिचाहिं माथापच्ची गरिरहनु परेको छ ।
यो समस्या भने राजनीतिक दलहरुकै कारण भएको हो । जसको सुरूवात दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाबाबु र उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट भएको हो । गिरिजाबाबुले राजालाई किनारा लगाउने अनि समस्याको समाधान गर्ने भनेर ८ बुँदे सम्झौता गरे । अहिले मधेसी दलको माग त्यही ८ बुँदे सम्झौतामा आधारित छ । यदि उक्त सहमति ठीक थियो भने गिरिजाबाबुले गरेको सम्झौताको आधारमा माग पूरा गरिदिन किन आनाकानी किन भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर यथार्थ यो हो कि ती माग पूरा गरेको खण्डमा देशै रहँदैन । अनि कसरी माग पूरा गर्न सकिन्छ । समस्याको चूरो यो हो ।
सबै दलले नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ । यो राजनीतिको सामान्य नियम हो । तर जनताको पक्षमा भनिएको मधेसी आन्दोलन केहि सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि मात्रै देखिएको छ । विदेशीको सहाराबाट नेपाली जनताको माग पूरा हुन सक्दैन । जनताको चाहना बुझ्न बरू जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । जनताको अभिमत स्वीकार नगर्ने अनि विदेशीको मत लिने परिपाटी मधेस आन्दोलनमा देखिएको छ । यो गलत छ ।
०६२–६३ सालमा भएको आन्दोलन राजाको निरंकुशताको अन्त्यको लागि मात्रै थियो । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा बीचमा घुसाइयो । अहिलेको समस्याको अर्को कारण त्यो पनि हो । गणतन्त्र आएपछि राजाले गर्न अस्वीकार गरेका काम धमाधम गरिए । त्यसैमध्येको एउटा हो ४० हजार भारतीयलाई नागरिकता दिने गरि गरिएको निर्णय । त्यही कारणले अहिले तराइमा बल्झिएको हो । सरकाले यस्ता बिषयलाई पुनः छलफल गरेर गहन छानबिन गर्नुपर्छ । विदेशीको हातमा पुगेको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ । त्यसपछिमात्रै समस्या समाधान हुन्छ ।
जनतालाई दुःख दिएर पनि जनताकै पक्षमा ?
संविधानसभाबाट आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन गराउन नसकेपनि हामी केहि हदसम्म सन्तुष्ट छौ । हाम्रो माग पुरा नहुँदा–नहुँदै पनि चुपचाप छौं । तर अधिकांश माग सम्बोधन भएको अवस्थामा मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा लाग्नु नै रहस्यको कुरा हो । यदि त्यसो होइन भने उसले विधि र प्रक्रियामार्फत समस्याको निकासको लागि अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।
यो संविधान राप्रपा नेपालले भनेजस्तो पनि बनेको छैन । कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले भनेजस्तो पनि बनेको छैन । र, मधेसीले भनेजस्तो पनि बन्दैन । किनकि यो सम्झौताको संविधान हो । जसलाई दुई तिहाइको बलमा परिवर्तन गर्ने अधिकार प्राप्त छँदैछ । त्यसैले जनतालाई दुःख दिएर होइन, विधि र प्रक्रियामार्फत संविधान परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक प्रजातन्त्रवादी यो मान्यतामा मान्यतामा आउनै पर्छ । जनतालाई दुःख दिएर जनताकै लागि लडेका हौं भन्नु हास्यास्पद हुन्छ ।
ओलीलाई राजनेता बन्ने अवसर
यी सारा चुनौतिबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजनेता हुने अवसर जनताले दिएका छन् । त्यसका लागि उनको हृदय ठूलो हुनुपर्छ । इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्छ । पार्टीभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । नेपाली जनताको चाहनालाई परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ । यो जटिल परिस्थितिमा उदारता देखाएर विश्वमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हामीले साथ दिएको पनि जटिल अवस्थालाई सल्टाउन नै हो । अहिले देश भूकम्पको पीडामा पनि छ । १४ ओटा जिल्ला तहस–नहस भएको छ । मानिसको मनसमेत भत्किएको छ, ओत लाग्ने ठाउँ छैन । अर्कातिर मधेस आन्दोलनले मुलक आक्रान्त छ । भारतको नाकाबन्दीका कारण जनताले कष्ट भोग्नु परेको छ । यो समस्या समाधान गर्न सबै मिल्नुपर्छ भनेर नै पार्टी सरकारमा गएको हो । यदि हामीले आशा गरेअनुसार उनले काम गरेनन्, धरातल छोडे भने कुनैपनि बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्छौ । हामी सत्ताभोगको लागि होइन, मुलुकको समस्या समाधानका लागि सरकारमा गएका हौं ।
सरकारमा भएपनि कुनै पनि मन्त्रीले जनताको चाहनाको विरुद्धमा काम नगर्ने राप्रपा नेपालको प्रतिबद्धता छ । प्राविधिकि कारणले गर्दा अध्यक्षलाई दुई ओटा मन्त्रालय दिइएको छ । सदस्यहरुमध्ये केहिलाई मन्त्रीको र केहिलाई संसदको जिम्मेवारी दिँदा त्यस्तो भएको छ। यसमाथि स्थानीय विकास मन्त्रालय सरकारसँग जोडिएको विषय भयो । जनताको घरघरमा यसको संरचना छ । त्यसकारण यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा प्रान्तिय र आम निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने हुँदा हाललाई परराष्ट्रसहित स्थानीय विकास मन्त्रालय अध्यक्षले नै हेर्ने भन्ने पार्टीको निर्णय हो । पछि अवस्था र परिस्थितिलाई हेरेर फेरबदल हुन पनि सक्छ ।
बाँकी नै छ राप्रमा नेपाल उदाउने आधार
यदिबेला राप्रपा नेपालले आफ्ना मुद्दा छाडिसक्यो भन्ने पनि छन् । हामीलाई ठीक ढंगले बुझ्न नसक्नेले त्यसो भन्ने हो । हामीलाई जसले बुझेको छ, हामीले उपलब्धी हासिल गरिरहेको देखेका छन् । हाम्रो पार्टीबाट पहिलो संविधानसभामा जम्मा चार जना थिए, दोस्रोमा २४ जना पुर्यायौं । तर पनि हामीले चाहेजस्तो संविधान बनाउन सक्ने हैसियत त्यतिले पुग्दैनथ्यो । तर हामीले निरन्तर आफ्ना मुद्दा उठाइरह्यौं । संविधान बन्दासम्म लडिरह्यौं । संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्रलगायतका विषयमा मत विभाजन हुँदा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले साथ दिएनन् । तर, भोट हाल्दा सबै नेपाली जनताले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रतिनिधिलाई पनि हिन्दु देखेरै भोट हालेका थिए । तर उनीहरूले जे गरे, त्यो नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । अहिले हिन्दुत्व राप्रपा नेपालमा मात्रै रहेछ, उसलाई भोट नदिँदा ठूलो गल्ती गरिएछ भन्ने महसुश उनीहरुले गरेका छन् । यो नै पार्टीको उपलब्धी हो । हामी संख्यामा हारेका हौं तर जनतामा गएर फेरि त्यसलाई स्थापीत गर्ने आधार बाँकी नै छ । जनताले हिन्दु राष्ट्रमा विश्वास व्यक्त गरे देशको पहिलो शक्ति बन्न सक्छौं ।
हामी बन्छौं नयाँ शक्ति
अहिले नयाँ शक्तिको चर्चा भइरहेको छ । वास्तवमा राप्रपा नेपालको लक्ष्य नै नयाँ शक्ति निर्माण हो । हाम्रो नयाँ शक्ति भनेको नेपाली जनताको सुख र समृद्धि हो । त्यो भनेको विकास हो । विकासको उपभोगले सुख र समृद्धि पैदा गर्छ । त्यसो हुनेबित्तिकै राप्रपा नेपाल देशको नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउने निश्चित छ । हामीले हाम्रा धर्म संस्कृति मूल्य मान्यता केही पनि छाडेका छैनौं । हामीलाई जसले सबै मुद्दा छाड्यो भनेर आरोप लगाएका छन् । कुरै गरेर रमाउने मान्छेलाई त मजा लागेको होला, तर नेपाली जनताको कष्टलाई राप्रपा नेपालले सम्मान पूर्वक उद्दार गर्न सक्छ भन्ने विस्वासमा हामी अघि बढिरहेका छौं । अब आउने आवधिक निर्वाचनमा हामी यही मुद्दालाई लिएर इमान्दारितापूर्वक जनतामा पुग्छौं ।
(रातोपाटीका लागि राजकुमार सिग्देलले गरेको कुराकानीमा आधारित)